Somaliland: Shirkada Flydubai Oo Ka Hadashay Dhacdadii Madaarka Cigaal Lagaga Reebay Diyaaradda Ee Doodaha Dhalisay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Shirkada Flydubai Oo Ka Hadashay Dhacdadii Madaarka Cigaal Lagaga Reebay Diyaaradda...
Shirkadda flydubai ee duulimaadyada ku timaada garoonka Cigaal ee Hargeysa ayaa ka hadashay dhacdo jimcihii toddobaadkan ka dhacday madaarka Hargeysa oo diyaaradda lagaga reebay gabadh reer Somaliland ah oo Ingiriiska ku sii jeeday taas oo sababtay muran iyo doodo badan.
Warsaxaafadeed ay shirkadu soo saartay waxay ku sheegtay in ahmiyada koowaad ee shirkadu tahay badbaadada rakaabka iyo shaqaalahooda, waxaanay sheegtay shirkadu in haweenayda rakaabka ahayd diiday kursi bedeladaad ah oo ay shaqaalaha diyaaradu siiyeen. Qoraalka oo ciwaan looga dhigay “Badbaadada rakaabkayaga iyo shaqaalahayaga ayaa ahmiyada koowaad ah, waxaanan rajaynaynaa in shaqaalaha iyo rakaabka loola dhaqmo si ixtiraam leh.” ayaa wuxuu u dhignaa sidan “Waanu ka war qabnaa qaska duulimaadkii flydubai ee numberkiisu ahaa FZ 662 ee 25 August ee ahaa Hargeysa—Dubai.
Rakaabku wuxuu diiday bedelaadii kuraasida ee ay shaqaalahayaga tababarani u soo bandhigeen, Intaas ka bacdi may sii wadan duulimaadkeedii ahaa Dubai. Waxaanu ka raaligelinaynaa rakaabkii duulimaadkaas saarnaa wixii si aan ku tallo galay ahayn u dhacay ee sababay dib u dhaca.
Waxaanu ku samaynaynaa baadhis dheeraad ah dhammaan dhinacyada ay khusayso oo dhan.”
Shirkadu waxay qoraalkeeda ku sheegtay in duulimaadka diyaaradaas uu dib u dhac ku yimid saacad iyo 39 soddon sikin.
Geesta kale gabadh lagu magacaabo Sally Saleh oo ka mid ah shaqaalaha diyaaradda flydubai ayaa qoraal ay soo dhigtay barta ay ku leedahay facebook, waxay kaga hadashay dhacdadaas. Gabadhan oo u muuqata inay ka mid ahayd shaqaalihii diyaaradda maalintaas la socday, ayaa waxay ay qoraalkeeda ku tidhi “Qof ilmo yar wata ayaa fadhiistay kursiga ku beegan kadinka xaaladaha degdegga ah loo isticmaalo ee baalka dushiisa. Sababo la xidhiidha bad-baadada rakaabka awgoodna lama ogola in hooyo ilmo yar sidata ama carruuri ay halkaas fadhiistaan. Haddii aanay doonayn (Rakaabku) in ay raacaan halbeegyada badbaadada, duulimaadku waxa uu xaq u leeyahay in uu diyaaradda ka dejiyo qof kasta oo diida in uu raaco badbaadada.”
Somaliland: Maamulka Puntland Oo Shardiyo Waali Ah Ku Xidhay Xabad Joojinta Iyo Wada Hadalada Somaliland + Muuqaal
Deg Deg: Sheekh Rusheeye Cajiib Ah Oo Ka Hilaacay Itoobiye Iyo Qaabka U Wax U Rusheynayo + Muuqaal
Somaliland: Siyaasi Caan Ah Oo Ku Biiray Xisbiga Waddani Iyo Beesha U Ka Soo Jeedo
Somalia: Mogadishu airport manager sacked